ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၁၂-၂၀၁၂ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၁၂-၂၀၁၂ - နံနက်ပိုင်း)
- လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု မန္တလေး-ရန်ကုန်-မုံရွာတွင် ဆန္ဒပြ click
- ဖမ်းထားသူများ လွှတ်ပေးရန်နှင့် လက်ပံတောင်းဖြိုခွင်းမှု တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းရန် ဆန္ဒပြ click
- ဒဏ်ရာအပြင်းဆုံး ကိုယ်တော်ကို ရန်ကုန်မြို့ ပင့်ဆောင် ကုသ click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများက ကြေးနီးတောင်စီမံကိန်း အကြမ်းဖက်မှုကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ click
- ဂဠုန်နီဆရာတော်၏ လက်ပံတောင်းတောင်အရေးအပေါ် သဘောထား (ရုပ်သံ) click
- လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ ဘဝ (ရုပ်သံ) click
- ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲ အောင်မြင် click
- အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် ကျင်းပ click
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် မြစ်ကြီးနားမှာ ကျင်းပမည် click
- နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေဖြင့် လုပ်သမျှသည် ပြည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်ဖြစ် click
- နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲသွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား click
- ဟိုနိုလူးလူး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမည် click
- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တရားစီရင်ရေးတွင် စွက်ဖက် click
- ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး အစိုးရနဲ့ သဘောတူညီမှုရ click
- ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနှင့် အစိုးရ အချက် ၂၇ ချက် သဘောတူ click
- ရခိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုနိုင်စိုး အညတရသူရဲကောင်းဆု ချီးမြှင့်ခံရ click
- မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲတရပ် အီတလီမှာ ကျင်းပ click
- သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ click
- အိုဘားမား နဲ့ Myanmar Egress လူငယ်ခေါင်းဆောင် click
- မြန်မာပြည် လမ်းမကြီးတလျှောက် တရုတ်အကျိုးစီးပွား (သုံးသပ်ချက်) click
“လွန်တာရှိ ၀န်တာ ‘မီး’ ပါဘုရား” (ကာတွန်း ဘီရုမာ – မိုးမခ၀က်ဘ်ဆိုက်)
- မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးရုံများ ငွေမျက်နှာကြည့်ကာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းနေဆဲ click
- မယားချစ်တဲ့ စခန်းမှူးကြောင့် နယ်စပ်စခန်းတခုမှ ရဲသားများ လစာမရ ဖြစ်နေ click
- ဒုတိယအကြိမ်မြောက် “ရက္ခိတ” မျိုးစောင့်ဆု ပေးအပ်မည် click
- မိုးမခဓာတ်ပုံတွေထဲက မြန်မာမြင်ကွင်း (မိုးကုတ်က နာမှု ကူညီရေး) click
- ဗီယက်နမ်သို့ အလုပ်သွားလုပ်ခြင်းနှင့် ဆောင်းပါးများ ကောက်နုတ်ချက် click
- သုံးဖက်မြင် အနိမ့်စံရဲ့ ကောင်းကင်ကစားပွဲ click
- အပြိုင်အဆိုင်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ (ကာတွန်း) click
- အီဂျစ်သမ္မတ လိုက်လျောမှုပြုပေမယ့် အတိုက်အခံ ဆက်ဆန္ဒပြ click
- ဆီးရီးယားတိုက်ပွဲတွေ ရပ်သွားဖို့က အဓိကလို့ ရုရှား ဆို click
- တရုတ်အစိုးရဆန့်ကျင်သူ တိဘက်လူမျိုးတဦး မီးရှို့ အဆုံးစီရင် click
- ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တရုတ်တို့ကြား တောင်တရုတ်ပင်လယ် အငြင်းပွားမှု (အသံ) click
- တိုင်ဖွန်းကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်မှာ ရာနဲ့ချီ ထိခိုက်သေဆုံး click
- အငြင်းပွားစရာတွေနဲ့ စာပေနိုဘဲလ်ဆုရှင် click
- ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ရခိုင်ပဋိပက္ခ သတင်းကား ထုတ်လွှင့် click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူငယ်တွေ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားတာကို ချီးကျူး click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြေလတ်ခရီးစဉ် click
- CNF နဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အပစ်ရပ်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုး click
- ဦးသန့်အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နိုင်/ကျဉ်းဟောင်းတချို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ (တနင်္ဂနွေ ဆွေးနွေးပွဲ) click
- ၀င်းဖေလွယ်အိတ် - ၂၂၀ (အသံ) click
- အီဂျစ်ဆန္ဒခံယူပွဲ အတိုက်အခံ ဆက်ကန့်ကွက် click
- ဗီယက်နမ်မှာ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြ click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရေးအဓိကရုဏ်း လူသေ click
“ဖေ့စ်ဘုတ်ကစ သမ္မတရုံး မီးလောင်” (ကာတွန်း ၀လုံး - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 4:06 AM
သိန်းစိန် လူ့ ငနွား. အောင်မင်း ဆောက်ကျင့်ယုတ် ဘောထမ်း ဝမ်ပေါင် မကောင်းဆိုးဝါး. ဦးပိုင်. လူစိတ်ပျောက်သူများ. စိတ်ချမ်းသာ ရဲ့လား. လူတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်. လာလိမ့်မယ်